धेरै दिन पछि मनकामना लघुवित्तकाे आइपीओ निस्कासन हुँदै (कति आवेदन दिने?) – OnlinePahar
धेरै दिन पछि मनकामना लघुवित्तकाे आइपीओ निस्कासन हुँदै (कति आवेदन दिने?)
२८ माघ २०७७, बुधबार ११:५५ Basanta Khanal	0 Comments	IPO
साधारण शेयरमा लगानि गर्न मन पराउनेहरुको लागि अर्को लघुबित्त कम्पनीले शेयर जारी गर्न लागेको छ । बिगत केही समय पछि नेपालको पूंजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता बढीरहेको पाईन्छ। भर्खर बजार प्रबेस गरेकालाई साधारण शेयरबाट राम्रै आम्दानीको कारण बजारप्रति बिशेष चासो रहेको छ । यसै पनि बजारमा साधारण शेयर भनेपछि हानथाप भएर आबेदन दिनेको सख्यांले गर्दा अहिलेको समयमा बिभिन्न बैंक तथा बित्तीय संस्थामा भीड़ बढेको देखिन्छ । अहिले १० वटा भन्दा बढ़ी कम्पनीहरुको शेयर जारी गर्न पाइपलाईनमा रहेका छन् । यस्तै, एक दर्जन बढी कम्पनीले शेयर जारीको लागि अनुमति माग्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिने तयारीमा रहेका छन् । जीवन विकास लघुवित्त, मनकामना स्मार्ट लघुवित्त, र सयपत्री हाइड्रोपावरले साधारण शेयर जारीको लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् । लगानीको अत्याधिक आकषर्णका विच धेरै कम्पनीहरुले शेयर निष्कासन गरिरहेका छन । त्यसो त धेरैको हात खालि हुदा लगानी कर्तामा निराश छाएको छ। कोहि लगानी कर्ता सिधै दोस्रो बजारबाट शेयर खरिद गरेको पनि बजारमा सुन्नमा पाउन सक्छौ। भुलेर पनि यी माथिका लघुवित्तको शेयरमा हजार रुपैया भन्दा बढीको शेयरमा आवेदन नदिनु उत्तम हुनेछ। त्यसको सट्टा बरु राम्रा कम्पनी छनोट गरेर दोश्रो बजारमा दिर्घकालिन रुपमा लगानी गर्न सकिने शेयर बिस्लेसक दिपक कार्की बताउनु हुन्छ।
लघुवित्तले सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ८ लाख २८ हजार ७५० कित्ता आईपीओ सर्वसाधारण (संस्थाका कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषसमेत) का लागि निष्कासन गर्ने भएको हो । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा संस्थाले ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । पर्वतको कुश्मा बजारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त “घ” वर्गको राष्ट्रियस्तरको वित्तीय संस्था हो । संस्थाको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ र जारी पुँजी २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत सेयर रहेको संस्थामा दुईवटा संस्था र ८१ जना संस्थापक सेयरधनीबाट १७ करोड २१ लाख २५ हजार रुपैयाँबराबरको शेयरपुँजी चुक्ता भइसकेको छ । वित्तीय संस्थाले हाल ५६ वटा शाखा कार्यालयमार्फत राष्ट्रियस्तरमा ७८ हजारभन्दा बढी विपन्न परिवारलाई समूहमा आबद्ध गरी वित्तीय सेवा दिँंदै आइरहेको छ ।विगत २० वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकवाट वित्तीय मध्यस्थकर्ताको कारोबार गर्ने इजाजत लिई काम गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय शैक्षिक तथा सामाजिक विकास संस्था नेष्डो नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा मिति २०७५ फागुन २९ गतेका दिनदेखि लघुवित्त वित्तीय संंस्थाका रुपमा इजाजत प्राप्त गरेसँगै वित्तीय कारोबार गर्दै आएको छ ।
source : statesemedia
← आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा, निजामतीका सन्ततिका लागि बेग्लै विद्यालय !
काठमाडौंले माग्यो कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो डोज लगाउन बाँकीको विवरण →